बेलायतमा लिइने ड्राइभिङ टेस्टमा भए यी ४ परिवर्तन... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
बेलायतमा लिइने ड्राइभिङ टेस्टमा भए यी ४ परिवर्तन…
लण्डन । बेलायतमा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन दिइने प्राक्टिकल टेस्टमा विभिन्न ४ वटा परिवर्तन भएका छन् । यी नयां परिवर्तन यहि डिसेम्बर महिनाको ४ तारिख सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको ‘द ड्राइभर एण्ड भेइकल स्टाण्डर्ड एजेञ्सी’ (डिभिएसए) ले बताएको छ ।
परिवर्तित नयां व्यवस्था सबैका लागि लागु भइसकेको छ । डिसेम्बर ४ अघि नै टेस्ट दिएर फेल भएका तथा पहिले नै बुक गरेर पनि अन्य कुनै कारणले टेस्टको मिति डिसेम्बर ४ भन्दा पर सारेकाहरुको लागि समेत परिवर्तन लागु हुनेछ ।
इंग्ल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्सको हकमा यी परिवर्तन गराइएका हुन् । नर्दन आयरल्याण्डमा ड्राइभिङ टेस्ट लिइने छुट्टै प्रबन्ध छ ।
के के भए ४ परिवर्तन ?
१ इण्डिपेन्डेन्ट ड्राइभिङ अब २० मिनेट
यसअघिको व्यवस्थामा टेस्टको दौरान इण्डिपेन्डेन्ट ड्राइभिङको समय १० मिनेट हुन्थ्यो । जसलाई बढाएर अब २० मिनेट बनाइएको छ । जुन सिंगो टेस्ट अवधिको झण्डै आधा समय हो ।
२ नेभिगेटरको निर्देशनमा ड्राइभिङ
अबदेखि इण्डिपेन्डेन्ट ड्राइभिङको समय धेरैजसो परीक्षार्थीहरुलाई नेभिगेटरको निर्देशनअनुसार गाडी चलाउन लगाइनेछ । नेभिगेटरको सेटिंग परीक्षार्थीले गर्न पाउनेछैनन्, परीक्षक(इक्जामिनर) ले नै गर्नेछन् । त्यसैले तपाईले कुन खालको नेभिगेटरमा अभ्यास गर्नुभएको छ भन्नेले खासै फरक पार्नेछैन ।
आफुलाई कतातर्फ जाने भन्ने अलमल भयो भने परीक्षकलाई सोध्न पाइनेछ । गलत दिशातर्फ गएपनि त्यसक्रममा कुनै गल्ती नगरेको अवस्थामा त्यसले असर गर्नेछैन ।
८० प्रतिशत टेस्टमा नेभिगेटरको निर्देशनमा गाडी चलाउन लगाइएपनि बांकी २० प्रतिशत टेस्टहरुमा यो नलगाइने बताइएको छ ।
३ गाडी फर्काउने मोनुभरमा परिवर्तन
ड्राइभिङ टेस्टमा पहिलेजस्तो ‘रिभर्स अराउण्ड अ कर्नर’ र ‘टर्न इन द रोड’ जस्ता मोनुभरहरु अब रहनेछैनन् । तर प्रशिक्षण लिने क्रममा प्रशिक्षकबाट सिक्नु भने पर्नेछ ।
परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार अबदेखि सडकको छेउमा प्यारालल पार्किंग, बे पार्किंग ( सिधा भित्र जाने र बाहिर फर्किने वा भित्र गाडी फर्काउने र सिधा बाहिर आउने ) र ‘पुल अप अन राइट’ (सडकको दाया छेउमा रोक्ने, २ वटा कारको लम्बाइ जति गाडी फर्काउने र फेरि सडकको ट्राफिकमा जाने) मध्ये कुनै एक गर्न लगाइनेछ ।
४ भेइकल सेफ्टी प्रश्न
अबदेखि परीक्षार्थीले गाडी चलाइरहेकै अवस्थामा परीक्षकले गाडीको सेफ्टीसम्बन्धी २ वटा प्रश्न सोध्नेछन् । यी प्रश्नहरु ‘टेल मि’ र ‘शो मि’ का रुपमा चिनिने गर्छन् ।
‘टेल मि’ प्रश्न अन्तर्गत परीक्षार्थीले गाडीको सुरक्षासम्बन्धी काम कसरी गर्ने भनेर बताउनुपर्नेछ भने ‘शो मि’ अन्तर्गत कसरी गर्ने भन्ने गरेर नै देखाउनुपर्नेछ ।
टेस्टको समय, उर्तीणांक र शुल्क यथावत्
ड्राइभिङ टेस्टमा यी मुख्य ४ परिवर्तनहरु गरिएको भएपनि टेस्टको समय, पास गर्न ल्याउनुपर्ने अंक र टेस्टको शुल्क भने यथावत राखिएको छ ।
टेस्टको लागि पहिलेजस्तै ४० मिनेटको हाराहारीमा समय लाग्नेछ । परीक्षकले पास वा फेल गर्ने तरिका पनि पहिलेको जस्तै रहनेछ । बढिमा १५ वटा साना गल्ती र कुनै पनि ठूलो गल्ती नभए टेस्ट पास हुन सकिनेछ ।
टेस्टका लागि शुल्क पनि पहिले जति थियो, त्यति नै रहनेछ ।
नयां टेस्ट थप व्यवहारिक
ड्राइभिङ टेस्टमा गरिएको पछिल्लो परिवर्तनलाई जानकारहरुले सकारात्मक भनेका छन् । नेपालिज ड्राइभिंग इन्स्ट्रकटर एशोसिएसन यूकेका महासचिव राज विष्टले परिवर्तनपछि टेस्ट पहिलेको भन्दा सजिलो र थप व्यवहारिक बनेको बताउंछन् ।
‘परिवर्तन भन्नेबित्तिकै हामीहरु डराउने बानी भएर हो’, विष्टले भने, ‘तर नयां टेस्ट त पहिलेभन्दा झन् सजिलो पो भएको छ । अझै महत्वपुर्ण यो थप व्यवहारिक बनाइएको छ ।’
लण्डनस्थित सिटी ड्राइभिङ लेसनका एकजना प्रशिक्षक विष्णु ज्ञवालीले पनि यसलाई सकारात्मक भन्दै परिवर्तित टेस्ट पुरानोभन्दा बढि उपयोगी र व्यवहारिक हुने बताएका छन्।
टेस्टका क्रममा धेरैले अफ्ठेरो मान्ने कर्नर रिभर्स हटाइएको अर्थमा टेस्ट थप सजिलो हुने प्रशिक्षक ज्ञवालीको विश्वास छ । नेभिगेटरको निर्देशनमा गाडी चलाउन लगाउने, सडकको दाया छेउंमा पुल अप गर्न लगाउने जस्ता विषयले यो टेस्ट थप व्यवहारिक हुने उनले बताए । – नेपालीपत्रबाट